Manner of Death - BLSFlix
Original title: พฤติการณ์ที่ตาย
First air date: 30-11-2020
Rating: 5.0 88 votes
45m 2020 38,772 views
Dr. Bunnakit (Knock) ဆေးရုံမှာတာဝန်ကျတဲ့ ရင်ခွဲဆရာဝန်ပါ. တစ်နေ့ ကိုယ့်ကိုကိုသတ်သေတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ရင်ခွဲပြီးတဲ့အခါ Dr. Bunnakit ဟာ လူသတ်မှုဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်.သူ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကြောင့် သူဟာ ပါဝါရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ ပစ်မှတ် ဖြစ်လာပါတော့တယ်. အဲဒီလူဟာ Dr. Bun ရဲ့ အိမ်ထဲကို ခိုးဝင်ပြီး ချိန်းခြောက်ကာ အမှုကို သတ်သေမှုလို့ ပြင်ခိုင်းခဲ့ပေမဲ့လည်း Dr. Bun ဟာ တကယ်တမ်းကျတော့ မပြင်ခဲ့ပါဘူး
ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း တရားလိုရှေ့နေ့တစ်ယောက် ပျောက်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ​တေ့ာ Dr.Bun ဟာ ဒီအမှုရဲ့နောက်ကွယ်က အမှန်တရားကို တိတ်တဆိတ် စုံစမ်းပါတော့တယ်
Dr.Bun တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သဲလွန်စအားလုံးဟာ သူမသိပါဘူးလို့ ငြင်းဆိုနေသော Tan လို့ခေါ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီ ဦးတည်နေပြီးတော့ ထို Tan ဆိုသောသူက တကယ့် လူသတ်သမားအစစ်ကို အတူရှာရန် Dr.Bun အား သူနဲ့ အတူပူပေါင်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်လာသောအခါ…..
Dr. Bunnakit (Knock) ေဆး႐ုံမွာတာဝန္က်တဲ့ ရင္ခြဲဆရာဝန္ပါ. တစ္ေန႔ ကိုယ့္ကိုကိုသတ္ေသတယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ရင္ခြဲၿပီးတဲ့အခါ Dr. Bunnakit ဟာ လူသတ္မႈျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္.သူ႔ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေၾကာင့္ သူဟာ ပါဝါရွိတဲ့လူတေယာက္ရဲ့ ပစ္မွတ္ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္. အဲဒီလူဟာ Dr. Bun ရဲ့ အိမ္ထဲကို ခိုးဝင္ၿပီး ခ်ိန္းေျခာက္ကာ အမႈကို သတ္ေသမႈလို႔ ျပင္ခိုင္းခဲ့ေပမဲ့လည္း Dr. Bun ဟာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ မျပင္ခဲ့ပါဘူး
ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ့ သူငယ္ခ်င္း တရားလိုေရွ႕ေန႔တစ္ေယာက္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ​ေတ့ာ Dr.Bun ဟာ ဒီအမႈရဲ့ေနာက္ကြယ္က အမွန္တရားကို တိတ္တဆိတ္ စုံစမ္းပါေတာ့တယ္
Dr.Bun ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ သဲလြန္စအားလုံးဟာ သူမသိပါဘူးလို႔ ျငင္းဆိုေနေသာ Tan လို႔ေခၚတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဆီ ဦးတည္ေနၿပီးေတာ့ ထို Tan ဆိုေသာသူက တကယ့္ လူသတ္သမားအစစ္ကို အတူရွာရန္ Dr.Bun အား သူနဲ႔ အတူပူေပါင္းဖို႔ ဖိတ္ေခၚလာေသာအခါ…..